दाङको घोराही–१६ मा कांग्रेसका उम्मेदवार डाँगी बिजयी-Tikho Khabar
दाङको घोराही–१६ मा कांग्रेसका उम्मेदवार डाँगी बिजयी
तिखो खबर २०७६ मंसिर १५ गते आइतबार ०७:१०:२४ २०४० पटक हेरिएको
१५ मङ्सिर दाङ :
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं.१६ मा नेपाली कांग्रेस बिजयी भएको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ताराबहादुर डाँगीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार सुरेशबहादुर केसीलाई पराजित गर्दै वडा अध्यक्षमा बिजयी भएका हुन ।
कांग्रेसका उम्मेदवार डाँगी १२२२ मत प्राप्त गरि बिजयी भएका हुन । उनका प्रतिद्धन्द्धी नेकपाका उम्मेदवार केसीले १११७ मत प्राप्त गरेका थिए । डाँगीले प्रतिष्प्रर्धीलाई एक सय ५ मतले पछि पार्दै वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन ।
वडा नं. १६ मा रहेका ४ हजार ४ सय ५३ मतदाता मध्य ३ हजार दुई सय २६ जनाले मतदान गरेका थिए । जस मध्य ६८ मत बदर भएको थियो । गएको निर्वाचनमा यो वडामा नेकपा एमालेबाट लछिनप्रसाद बुढा बिजयी भएका थिए । बुढाको निधन भएपछि वडा नं. १६ मा उपनिर्वाचन भएको हो ।